एपीएलमा सन्दिपको टिम आज राति खेल्दै, आज पाउलान मौका ? – WicketNepal
एपीएलमा सन्दिपको टिम आज राति खेल्दै, आज पाउलान मौका ?
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ आश्विन २८, आईतवार १९:५६
अफगानिस्तान प्रीमियर लीग ( एपिएल ) टि-२० अन्तर्गत सन्दिप लामिछानेको टिम नगरहर लिओपार्डसले आज राति सातौँ खेल खेल्दैछ।
नगरहर लिओपार्डसले हिजो राति कन्दहर नाइट्ससंग भएको खेलमा २६ रनको पराजय बेहोरेको थियो। उक्त खेलमा नेपाली लेग स्पिनरलाई अन्तिम ११ मा स्थान दिईएको थिएन।
आज राति हुने खेलमा नगरहर लिओपार्डसले पक्तिया प्यान्थर्ससंग खेल्दैछ। प्यान्थर्सको कप्तानी मोहम्मद शहजादले गरिरहेका छन्। सन्दिपको टिम लिओपार्डसले प्रतियोगिताको ६ खेल खेल्दा २ जित र ४ बेहोर्दै अंक तालिकामा पाँचौ स्थानमा रहेको छ भने पक्तिया प्यान्थर्सले ५ खेलमा ३ जित र २ हार बेहोर्दै तेश्रो स्थानमा रहेको छ।
खेल सुरु हुने समय : आज राति ९:४५ बजे
हिजो सम्पन्न कन्दहर नाइट्स बिरुद्धको खेलमा अन्तिम ११ मा चर्चित स्पिनर मुजिब उर् रहमान, चाइनाम्यान बलर जहिर खान र लेग स्पिनर रहमत साहले स्थान बनाएका थिए। सन्दिप बिनाको खेलमा हार बेहोरे पनि टिमले राम्रो बलिङ्ग प्रदर्शन गरेको थियो। कन्दहरले २० ओभरमा १३७/८ मात्र बनाउन सकेको थियो र पनि दोश्रो इनिंगमा नगरहरले ११० रनमै अल-आउट हुँदा खेल हार्न पुगेको थियो।